It is me. Ko Niknayman.: အမေ မငိုပါဘူး။
အမေ့သား…. ထွက်သွားတာ ကြာပါရော့လား….
အမေ့ကိုထားပြီး … ထွက်သွားတာ ကြာပါရော့လား..။
ဒီတစ်ဝါဆိုမှာဖြင့် စာတွေကို သင်ယူဖို့အရေး
မြို့ရန်ကုန် ကျောင်းသင်္ကန်းကိုမှ မြန်းချင်သတဲ့လေ….
အမေ့ရင်ခွင်နွေးနွေးထက် … သာသနာ့အရိပ်က ပိုအေးသတဲ့
ပရိယတ္တိစာပေမှာထူးချွန်သူ သာသနာ့အာဇာနည်ဖြစ်လိုတဲ့ အမေ့သား
ဓါတ်ပုံလေး တစ်ပုံပဲ အမေ့ဆီရောက်လာတယ်….။
ညစ်နွမ်းနွမ်း စာရွက်ပေါ်က သားလက်ရေး
“လွတ်လပ်မှ အမျှပေးပါ အမေ” တဲ့….။
အမေ့ရင်ကို ခွဲသွားတဲ့သား … မင်းဘယ်နေရာမှာများလဲ…
အမေ့သားရဲ့အမှာစကား …. အမေအလေးထားလို့
ရင်ထဲမှာရွာတဲ့မိုးကြောင့် နှလုံးသားက မောလှပြီ။
အမေ မငိုပါဘူးသားရယ်…. ဂုဏ်ယူပါတယ်။..
.ရေးသားသီဖွဲ့ သူ - မေမင်းဆက်။
Posted by Ko Niknayman at 5:10 AM